Webbing ဘာစီလိုနာ ကပြောပါတယ်
မေ 11, 2016 တွင် 4:09 ညနေ
မေ 13, 2016 တွင် 1:50 ညနေ
သင့် hard အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Lee က ကပြောပါတယ်
မေ 21, 2016 တွင် 7:24 နံနက်
လျင်မြန်စွာမေးခွန်း: ငါ၏အ server ကို Opcache install လုပ်လိုက်ပါတယ်, တက်ကြွပြုပြင်. အနာဂတ်လွှတ်ပေးရန် os Transposh ထောက်ခံမှုလိမ့်မည် Opcache?
မေ 24, 2016 တွင် 5:58 ညနေ
Opcache အသုံးပြုသူတစ်ဦး cache ကိုမဖြစ်, ငါတို့မူကားသတိပြုမိဖြစ်ကြောင်းဆိုအသုံးပြုသူ script ကို cache ကို (APC, APCl +, xCache) ထောက်ခံနေကြတယ်.
သြဂုတ်လ 19, 2016 တွင် 9:28 ညနေ
ငါ ~ 2010 ကတည်းကဒီ plugin ကိုသိကြပေမယ့်ကိုယ်ကပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထင်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးမှာငါ WPML အဘို့အသွား၏… (မဟုတ်ဖြင့် Transposh ကဲ့သို့တူညီသောလိဂ်အတွက်, WPML အော်တိုမဟုတ်ပါဘူး)
ငါကပိုမှားဘယ်တော့မှမ… WPML တစ်ခါတစ်ရံတွင်အရေးကြီးသော bug တွေရှိခဲ့ (ငါ့ထက် သာ. အတူ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည် 20.000 လာရောက်လည်ပတ်သူတစ်နေ့) နှင့် WordPress ကိုဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူ updated ခဲ့သည်တစ်ကြိမ်, ငါ၏အ site ကိုအော့ဖ်လိုင်းထားရှိမည်ကြောင်းအမည်မသိ bug ကိုအကြောင်းကိုအတွက် WPML နေဖြင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ 10 ရက်ပေါင်း… ဒီလိုရှည်စောင့်ဆိုင်းအချိန်မတတ်နိုင်, ငါ၏အအသွားအလာအဓိကအားဖြင့်အော်ဂဲနစ်ကြီးနှင့် Google ကျချိန်အကြောင်းကိုအလွန်လေးနက်ဖြစ်သကဲ့သို့…
Transposh သံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးဘာသာပြန်ချက် plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်, ကမစုံလငျင်ပေမယ့်, ကထိပ်တန်းင်နှင့်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထား.
သြဂုတ်လ 26, 2016 တွင် 1:06 ညနေ
အကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့ဘာသာပြန်စာပေ plugins ကိုတစျခုနှငျ့ငါ့အမြင်အတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှ.
အဲဒီမှာဥပမာအားပက်ကျိဘာသာပြန်ချက်တချို့တိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှငျ့ကွိုးဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ဆက်စပ်သောအချို့သောကိစ္စများ fixed နိုင်.
ဤသူကားငါ၏အကြိုက်ဆုံးဘာသာပြန်ချက် plugin ကို.
သြဂုတ်လ 26, 2016 တွင် 9:45 ညနေ
Havent သေးအသုံးပြု, ဒါပေမယ့်ဘိုင်ဒူအသိအမှတ်ပြုဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်. Baidu ၏ဘာသာပြန်ချက်၏အရည်အသွေးက Google နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမည်ကဲ့သို့ကောင်းသောသေချာမ.
ကသာတရုတ်များအတွက်ဘိုင်ဒူအသုံးပြုဒီတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့, နှင့် Google နှင့်အတူတုတ်နေရာတိုင်းအခြား.
နိုဝင်ဘာလ 7, 2016 တွင် 12:16 ညနေ